War Rasmi Ah: Uefa oo ku Dhawaaqday Afarta Xidig ee ku Tartameysa Ciyaaryahanka Todobaadka ee Champions League | Dalkaan.com
Home ciyaaraha War Rasmi Ah: Uefa oo ku Dhawaaqday Afarta Xidig ee ku Tartameysa...
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha ku tartami doona ciyaaryahankii ugu fiicnaa UEFA Champions League toddobaadkan xilli xalay iyo habeen hore la ciyaaray wareega saddexaad ee heerka Group-yada.
Afarta xiddig ee loolamaya usbuucan ayaa kala ah daafaca bidix ee Ajax ee Daley Blind, goolhayaha Liverpool ee Alisson Becker, weeraryahanka RB Salzburg ee Okafor iyo daafaca dhexe ee Sporting Lisbon ee Sebastian Coates.
Aan ku bilawnee Blind ayaa kamid ahaa kooxdii Ajax ee 4-0 kaga soo adkaatay Borussia Dortmund isaga oo gool iyo caawin soo sameeyay.
Dhinaciisa goolhaye Alisson ayaa walow ay laba gool shabaqiisa la gaadhay Atletico Madrid hana badbaadino saddex ah oo guusha ka caawiyay kooxdiisa Liverpool kasoo sameeyay ciyaartii ka dhacday habeen hore gegida Wanda Metropolitano.
Daafaca dhexe ee Sporting ee Sebastian Coates ayaa laba gool usoo dhaliyay kooxda caasimada Portugal habeen hore iyaga oo guul 4-1 ah kasoo gaadhay dhigooda Turkish-ka ah ee Besiktas oo ay marti u ahaayeen.
Xiddiga afraad ee liiska dhammaystiraya ayaa ah dhaliyaha RB Salzburg ee Okafor oo sabab u ahaa inay kooxdiisu saddexda dhibcood xalay ka wada qaadato Wolfsburg oo ay 3-1 kaga guuleysteen.
Ugu dambayn, xiddigaha wacdaraha soo dhigay balse laga reebay liiskan ayaa laga xusi karaa Mohamed Salah oo laba gool kasoo dhaliyay Atletico, Vinicius oo laba gool iyo caawin kasoo sameeyay kulankii Real Madrid ka adkaatay Shakhtar iyo Leroy Sane oo xalay laba gool iyo caawin ku kala gooyay Benfica.
Previous articleWararkii u dambeeyey ee doorashada Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo..
Next articleWariyeyaal caan ah oo lagu xiray magaalada Jowhar + sababta
Jesse Lingard ayaa shaaca ka qaaday inay ka go’an tahay inuumar kale noqdo xiddig muhiim u ah Manchester United , iyadoo weeraryahanku uu...
Halkee ayey mareysaa dacwadda kursiga Mahdi Guuleed?
Rio Ferdinand oo soo jeediyay in la joogo waqtigii Manchester United...
Daawo: AMISOM oo xashiish iyo daroogo ku abuurtay beero ay leeyihiin...
Siyaasi ka tirsan xisbiga Wadajir oo xildhibaan loo doortay kadib doorasho...
Manchester United oo cadaadis xoogan saareysa saxiixa Xidiga AC Milan ee...